Umkhiqizo owusizo futhi onomsoco uvela kangaki etafuleni lakho, njengebhontshisi? Izindlela zokupheka zokulungiselela izitsha ezihlwabusayo ezivela kulesi siko ongafunda ku-athikili yethu bese wenza imenyu evamile ehlukene kakhulu.
Ngingaba kanjani ukupheka ubhontshisi obunziwe? Izindlela zokupheka zokupheka izitsha ezivela kubo zilula. Ngakho-ke, sebenzisa incazelo yethu bese upheka isidlo esimnandi kumndeni wonke ngesigamu sehora. Siyaqiniseka ukuthi uzokujabulela ukunambitheka okunomsoco wesobho nokubunjwa kwawo okulula. Iresiphi:
Vula imbiza (amagremu angu-400) wabhontshisi obomvu, uwafake esitsheni bese ugaxa ngemfoloko.
Faka ikhasi elilodwa ne-clove elilodwa likagaliki emakhakheni. Gaya ngabo ngommese.
Beka ibhodlela elilodwa lamalitha emlilweni, uthele amafutha ommbila phansi bese ubeka anyanisi olungiselelwe kanye negalikhi. Engeza kubo isigamu se-oregano ye-teaspoon bese udosa ukudla imizuzu embalwa.
Vula imbiza yamatamatisi ngejusi lakho (amagremu angu-500) uwafake epanini.
Bese uthumela umlenze owodwa nesigamu noma amabili we-inkukhu kanye nengxenye isipuni sepuni elimnyama.
Gcoba ukudla bese ulinda isobho ukuba ubilise. Emva kwalokho, yehlisa izinga lokushisa lokushisa bese upheka isobho ngeminye imizuzu engu-20.
Ngemuva kwalokho, faka ubhontshisi olungiselelwe kanye nengxenye yesithathu yengilazi ye-pasta kuwo (kungcono ukuthatha njengezigobolondo). Usawoti ukunambitha.
Lapho isidlo sesilungile, masibeke ngaphansi kwesivalo esivaliwe okwesikhashana, bese ukhonza etafuleni, uhlobisa amahlamvu ngama-parsley.
Isaladi ngamabhontshisi kanye noshizi
Ngaphambi kokuba uthole iresiphi yesaladi esiphundu, isithako esiyinhloko samabhontshisi. Izindlela zokupheka zokulungiselela izitsha zemikhosi zivame ukuthi zibandakanye le nxenye, ngoba iyinhliziyo enhle futhi enhle kakhulu. Indlela yokulungisa isaladi ngobhontshisi:
Amagremu angama-gramu we-shizi kanzima anqamuke emagumbini amancane noma i-grate ku-grater enkulu.
Pepper ezimbili ezimibalabala zeBulgaria zigeza, ususe isitshalo kanye nembewu, bese uthatha ama-cubes amancane.
Vula imbiza ngamabhontshisi okusemathinini bese uwafaka phezu kwe-colander ukuze ukhiphe uketshezi oluningi.
Hlanganisa yonke imikhiqizo esitsheni sesaladi, engeza kuzo iziqephu ezimbalwa zikagalikhi, udluliselwe emshinini.
Isaladi lesikhumba esilula silungile, futhi ungayisebenzela izivakashi kanye neziphuzo.
Ukuhlobisa ubhontshisi kanye nobhontshisi
Lesi sikhathi sinikeza wena ukuba uzame isidlo esimnandi esivumelana ngokuphelele nenyama nemikhiqizo ebhemayo. Futhi, ingakusiza ekuthunyelwe noma kufanelekile kwimenyu yemifino. Ukupheka okupheka (ubhontshisi) kuvame ukulula, futhi isidlo sethu yisibonelo esihle kakhulu salokhu. Okudingayo ukukwenza:
Half ingilazi yobhontshisi owomile nengxenye yengilazi yamabhontshisi owomile ugobe ezitsheni ezahlukene zamahora amaningana.
Ngemuva kwalokhu, pheka ukudla kuze kube yilapho usulungile, futhi uhlukanisane nomunye nomunye.
Faka ikhasi izaqathe ezimbili ezinkulu bese uzisika zibe cubes.
Susa i-bulb eyodwa enkulu kusuka kugobolondo bese uthatha izindandatho ezingamashumi.
Sika utamatisi amakhulu amabili zibe yi-cubes, bese usika ama-clove amane e-garlic kahle.
Phakamisa ipanishi lokuthoza ngamafutha omquba, fry izaqathe nge-basil ne-oregano. Ngemuva kwalokho, siphume ngomsindo bese uyishintshela esidlweni kuya kubhontshisi kanye nobhontshisi.
Esikhathini esifanayo sokupaka, u-anyanisi othosiwe kanye nogalikhi, futhi ususe nabo ngomsindo bese udlulisela eminye imikhiqizo.
Ekuphendukeni kokugcina, utamatisi gazinga. Ungazikhohlwa ukuthi usawoti kancane, futhi uzinike isikhathi se-pepper omnyama ne-oregano.
Gcoba ukudla, ufafaze ama-herbs oqoshiwe bese ukhonza isitsha etafuleni.
Ubhontshisi obuhle. Ukupheka zokupheka ebusika
Njengamanye amasiko amaningi, ubhontshisi kungavuna ubusika. Lokhu kuzobavumela ukuba bajabulele ukunambitheka kwabo futhi benze izitsha zabo ezizithandayo nganoma yisiphi isikhathi. Sifuna ukukutshela ngezindlela ezithandwa kakhulu zokuvuna:
Ukumisa - ama-pods amasha athathwa, anqume amathiphu kanye nengxenye embi emkhombeni. Emva kwalokhu, ama-pods anqunywa futhi abilisiwe ngamaminithi ambalwa epanini. Okulandelayo, ubhontshisi kufanele wome, uhlakaze emgqeni, bese ubeka ibhake lokubhaka bese ufaka kuhhavini ngamahora amaningana. Ukushisa okushisa kufanele kube yi-degree 60-70.
Ubhontshisi - abhontshisi abancane abanjwe emakhadini, abilisiwe ngamaminithi amaningana, omisiwe, bese befakwa emaphaketheni bese efakwe efrijini.
Ukulondolozwa - ama-pod ekhethiwe asetshenzwa futhi abiliswe ngesisombululo se-salva ka-3%, bese efakwe izimbiza ezinomtholo kanye nama-dill, amaqabunga ebhontshisi, usawoti kanye nezinongo. Okulandelayo, ubhontshisi bathululelwa ngamanzi ashisayo ashuni, embozwe ngamabhodlela futhi angagciniwe ihora nehafu ekushiseni kwama-80 degrees.
Ungasebenzisa noma yiziphi izindlela ezichazwe zokugcina nokugcina ubhontshisi obathandayo ubusika. Ukupheka ngokupheka izitsha okumnandi ezivela kubo ungathatha kulokhu okushiwo.
Ukupheka kokulungiselela lo mkhiqizo akuwazi kahle kakhulu ezweni lethu. Ngakho-ke, siphakamisa ukuthi uzame ukushisa kwe-curry ngokufunda imiyalo elandelayo:
Nciphisa ubusuku emgodini owodwa we-soybean.
Hlanganisa ngamanzi ambalwa ingilazi yamalenti amnyama,
Gwema i-husk, bese uqeda i-anyanisi ne-clove kathathu ka-garlic.
Izaqathe ezimbili ezinkulu zihlanziwe, zihlutshiwe futhi zibe yimichilo emincane.
Hlanganisa amafutha omquba emanzini amancane emifanini bese uthola anyanisi kuwo. Ekugcineni, engeza isipuni esisodwa se-curry (i-powder) bese upheka ngomzuzu owodwa.
Thepha ingxenye yengilazi yamanzi epanini lokuthosa, engeza izaqathe, isipuni esisodwa seganga lomhlabathi, i-garlic, isipuni se-paprika bese upheka ndawonye imizuzu embalwa.
Ama-soya we-Soy agcwalise izibuko zamanzi amathathu bese uwaletha emathunjini. Ngemuva kwalokho, faka i-lentils nokuqukethwe okufakwe epanini kubo.
Gcoba ukudla kuze kube yilapho lentile isilungile (cishe ingxenye yesigamu sehora).
Lungisa isidlo esilungile etafuleni elifudumele, ukufafaza ngamakhambi amasha.
Sithemba ukuthi uzothanda izitsha eziqukethe ubhontshisi okwenziwe ekheniwe. Zokupheka zokupheka ezichazwe kulesi sihloko zilula, futhi ngisho nochwepheshe ongenalwazi wokupheka angakwazi ukubhekana nazo. Ngakho-ke, funda imiyalelo ngokucophelela futhi ujabulise umndeni wakho ngezidlo ezintsha.
Indlela yokupheka isidlo esilula sebhontshisi - ubhontshisi obusiwe
I-Lasagna ngenyama enobuthi: okusheshayo futhi okumnandi
Ochwepheshe Bokufakwa Kwamagesi Nokushisa, Amadivaysi Ukufaka Amandla